Onye na-emepụta eriri USB nke China - Okwu Kwuru Okwu - Testeck Co., Ltd.
.Lọ > Ngwaahịa > USB
Ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ụgbọ ike
USB nwere nnukwu okpomọkụ na-eguzogide, nnukwu mkpụmkpụ-circuit okpomọkụ na-eguzogide, adụ na mfe iji wụnye, halogen-free ire ọkụ retardant, mmanụ na-eguzogide, na òké eguzogide.
KYJYP2 KYJYP3 akara eriri
Njikọ nke akara na akara sekit dị n'etiti ngwa eletriki dị iche iche nwere arụmọrụ ọkụ pụrụ iche na-ezute GB / T19666-2005; temperaturetọ ọkụ nke eriri USB adịghị ihe na-erughị 0 C; Igwe redio a na-erugharị abụghị ihe na-erughị 8 ugboro mpụga dayameta nke eriri ahụ (eriri nwere ọta teepu ọla kọpa abụghị ihe na-erughị ugboro 12 nke mpụga nke eriri ahụ); Mgbe ị na-ere ọkụ, njupụta anwụrụ ọkụ gas dị obere, na-adịghị egbu egbu.
KYJYP akara USB
Igwe na-ehulata eriri nke eriri abụghị ihe na-erughị 8 ugboro nke eriri nke mpụga (eriri nwere eriri ọla kọpa abụghị ihe na-erughị ugboro 12 nke mpụga nke eriri); Mgbe ị na-ere ọkụ, ikuku anwụrụ ọkụ gas dị obere, na-abụghị -esi; Fire nguzogide kwekọrọ na GB / T19666-2005; latọ okpomọkụ nke USB adịghị ihe na-erughị 0â ƒ.
USB njikwa eriri KYJY
Igwe na-ehulata eriri nke eriri abụghị ihe na-erughị 8 ugboro nke eriri nke mpụga (eriri nwere mkpuchi ọla kọpa abụghị ihe na-erughị ugboro 12 nke eriri nke mpụga) .Mgbe ọkụ, ọkụ ọkụ anwụrụ ọkụ dị obere, ọ bụghị -adị egbu egbu.
CAT5 100 ohm symmetrical na kpara akpa
Typedị data data a dabere na arụmọrụ ọkụ na-achọ nke ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè. N'ime ọkụ, anwụrụ ọkụ dị obere mgbe eriri USB na-agba ọkụ, anwụrụ ọkụ anaghị egbu egbu, na-emebi emebi ma na-anaghị ere ọkụ, eriri ahụ nwere njirimara EMC dị mma.
Eriri kọmputa kọmputa
A na-ejikarị eriri kọmpụta ọdụ eletrik maka njikọ nke akụrụngwa akụrụngwa na usoro nchedo akụrụngwa, ma ha dịkwa mma maka njikọ nke ahịrị nchekwa nchekwa ọha na eze. Eriri a nwere ike izipu akara analog na dijitalụ.
Testeck bụ otu n'ime ndị ọkachamara na ndị nrụpụta USB na China. Biko nweere onwe gị ịzụta nnukwu ogo USB dị na ngwaahịa ebe a wee nweta nkwupụta sitere na ụlọ ọrụ anyị. Ọzọkwa, ahaziri ọrụ dị.